Tsy talaky maso ao anatin’ny zavontenin’ny ‘fametrahana ho heloka bevava’ ny fanoherana ireo fomba ifaharana · Global Voices teny Malagasy
Tsy talaky maso ao anatin'ny zavontenin'ny ‘fametrahana ho heloka bevava’ ny fanoherana ireo fomba ifaharana
Voadika ny 05 Jona 2018 4:32 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, English
Ny Tetikasa Reframed Stories dia mangataka amin'ny olona mba hamaly ireo lohahevitra manjaka amin'ny fitantaram-baovao miresaka ny vondrom-piarahamonina misy azy. Ireny tantara ireny dia eritreritry ny olona izay matetika misolo tena ny hafa. Noforonina ny sehatra Media Cloud, fitaovana fanadihadiana lahatahiry izay manadihady angona fampahalalam-baovao amin'ny fotoana iray manokana, ka ahafahan'ny mpandray anjara mandinika sy mifanakalo hevitra momba ny fijery voalohany amin'izay anehoana azy ireo ao amin'ny fampitam-baovao. Mitandrina tsara ny tetikasa mba tsy hanao fehinkevitra maimaika momba ny lahatahiry, fa io no fiaingana miteraka sehatra hifanakalozan-kevitra amin'izay azon-dry zareo atao hamolavolana ny fampitam-baovaon-dry zareo manokana amin'ny alàlan'ny media nomerika.
Marcelo Santillán dia mpikambana ao amin'ny ekipa mpamoaka ny fandaharana isan-kerinandro “Descolonizar el Coco” ao amin'ny Radi Wambra Radio any Quito, Ekoadaoro. Ity manaraka ity dia fandefasana ny lahatsary momba ny fandalinana nataon'i Marcelo momba ny zavon-teny hoe “criminalización” (fanaovana ny fihetsiketsehana ho heloka bevava) satria mifandraika amin'ny zava-misy Ekoadaoreana izany.
Ireo voambolana manjaka avy amin'ny lahatsoratra nivoaka tanelanelan'ny Janoary 2017 ka hatramin'ny aprily 2018 hita nanonona ny “criminalización” ‘ (lahatsoratra 141) ao anatin'ny angona Media Cloud 2 amin'ny sehatra fampitam-baovao miteny Espaniola ao Ekoadaoro. (jereo amin'ny sary lehibe kokoa)
Inona no zavon-teny nahasarika ny sainao indrindra?
Gaga aho fa ny voambolana “fanaovana ho heloka bevava” dia lasa mifintina ho dingana ara-batana tahaka ny herisetra ara-batana ataon'ny Fanjakana amin'ny vahoaka, [indrindra] ny vahoaka malaza.
Araka ny zavon-teny, ahoana ny fisehoan'ny voambolana hoe “fametrahana ho heloka bevava” ao amin'ny haino aman-jery?
Fomba iray hiampangana famaizana, fanavakavahana sy ny endrika herisetra saimbôlika, ara-batana, sy ara-pitsarana ataon'ny Fanjakana ao amin'ny vahoaka na vondrom-bahoaka hafa ny fametrahana ho heloka bevava ny [fihetsiketseham-panoherana]
Ahoana no tokony hisehoan'ny voambolana “fametrahana ho heloka bevava” (ny fihetsiketsehana) ao amin'ny haino aman-jery?
Ny mahaliana amin'ity fanadihadiana fampahalalam-baovao ity dia tao anatin'ny herintaona, lahatsoratra 187 * no nosoratana [momba ny fametrahana ho heloka bevava] ao amin’ [ity angon] ‘ny haino aman-jery ity. Vitsy kely no voasoratra momba izany. Noho izany, mahaliana fa azo soratana amin'ny alalan'ny sehatra fampahalalam-baovaon'ny vondrom-piarahamonina ny lohahevitra izay mety hahatonga ny lohahevitra tsy hijanona fotsiny amin'ny amin'ny fahatakarana ny fametrahana ho heloka bevava, ho herisetra sy famoretana, fa ho hita avy amin'ny endrika saimbôlika ihany koa izay mety mahatonga ny tolom-bahoaka ho tsy hita maso.
*fanamarihana: ny tena isan'ny lahatsoratra dia 141 araka ny filazan'ny Media Cloud
Inona no voambolana mety hananan'ny zavon-teny “fametrahana ho heloka bevava” (ny fihetsiketsehana)?
Tsy talaky maso miaraka amin'ny [voambolana] fametrahana ho heloka bevava ny dingan'ny fifaharana. Ny tantara no manana toetra maro hafa, indrindra ara-politika, ny tolon'ny vahoaka, tokony ho hita maso avokoa ao anatin'izany lohahevitra izany ny foiben'ny tolom-bahoaka ary tsy mihazakazaka manavatsava [hiala] izany izahay..
Ity dia ao anatin'ny andiana Rising Frames norafetina tamin'ny fiarahamiasa akaiky tamin'ny fikambanana El Churo ao Quito, Ekoadaoro. Nikarakara atrikasa natao ny 21 Aprily 2018 tao Quito izy ireo izay nampitambatra ireo solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrom-piarahamonina isan-karazany mba hanadihady ny fomba isehoan-dry zareo na ny lohahevitra tandrovin-dry zareo ao amin'ny angona media Ekoadaoreana ary hamorona tantara ho setrin'izany fisehoana izany.
Mónica Bonilla sy Belén Febres-Cordero no nifanampy tamin'ny fandikan-teny, izay nasiam-panovana mba hazava sy ho fohy kokoa.
Azia Atsinanana22 ora izay
Hira malaza, nefa voarara, ao Kiobà
Amerika Latina2 andro izay
"Fahitana vaovao ho ahy ny fihainoako voalohany ilay hira tamin'ny fotoana izay tsy nahitana sakafo tao an-tranoko."